Otu esi ehichapụ akaụntụ Samsung kpamkpam | Nzukọ mkpanaka
Ignacio Sala | 24/09/2021 16:00 | android, Nkuzi
N'oge na -adịbeghị anya, anyị ahụla ka esi jikọta mbata nke smartphones na a Nkwenye ntụkwasị obi na onye nrụpụta / gburugburu ebe obibi. Mgbe iji ekwentị Google ọ dị mkpa, ee ma ọ bụ ee, akaụntụ Gmail, n'ihe gbasara Apple, anyị ga -emerịrị akaụntụ n'elu ikpo okwu ha (ọ gaghị ejikọ ya na ikpo okwu email akọwapụtara).
Maka akaụntụ ndị a ejikọtara ịzụrụ ihe niile na anyị na -eme n'ime gburugburu ebe obibi ha, ha ga -anọkwa ebe ahụ ruo mgbe anyị ga -akagbu akaụntụ ahụ. Anyị nwere ike ịgbanwe igwe mkpanaka anyị ugboro ole anyị chọrọ ma gaa n'ihu na -anụrị ihe niile anyị ji akaụntụ ahụ zụta.
Otu ihe ahụ na -eme na akaụntụ Samsung, onye ọzọ na -emepụta ihe wụfuru na bandwagon akaụntụ. idobe ndị ọrụ ya. Samsung na -enye ndị niile zụrụ otu n'ime ngwaahịa ya, usoro ọrụ nke naanị ndị ọrụ a nwere ike ịnụ ụtọ ya.
1 Kedu ihe bụ akaụntụ Samsung
2 Kedu ihe anyị nwere ike iji akaụntụ Samsung mee
2.1 Kwụ ụgwọ site na Samsung Pay
2.2 Chọta ekwentị ma ọ bụrụ na anyị efunahụ ya
2.3 Ịnweta ngwa pụrụ iche
2.4 Accessnweta ụlọ ahịa Samsung
2.5 Ụlọ Samsung
2.6 Mee akwụkwọ ndabere
3 Akaụntụ ahụ ọ bara uru na akaụntụ Samsung?
4 Otu esi emepụta akaụntụ Samsung
5 Otu esi ehichapụ akaụntụ Samsung
Kedu ihe bụ akaụntụ Samsung
Akaụntụ Samsung, dị ka akaụntụ Google na ndị anyị mepụtara iji iPhone, na -enye anyị usoro nke mgbakwunye uruUru dị naanị n'etiti ngwaahịa nke onye nrụpụta a, n'agbanyeghị na ụfọdụ n'ime ha bụ otu Google na Apple na -enye anyị.
Kedu ihe anyị nwere ike iji akaụntụ Samsung mee
Kwụ ụgwọ site na Samsung Pay
Isi uru dị n'inwe akaụntụ Samsung bụ na anyị nwere usoro ịkwụ ụgwọ Samsung, akpọrọ Samsung ịkwụ ụgwọ. Ebe ikpo okwu a dị ebe niile karịa Google Pay yana karịa Apple Pay.
Chọta ekwentị ma ọ bụrụ na anyị efunahụ ya
Ọ bụrụ na anyị efunahụ ekwentị anyị, ekele maka akaụntụ Samsung anyị anyị ga-enwe ike ịchọta ngwa ngwa ọnọdụ nke ama anyị. Ọ bụrụ na agbanyụrụ, ikpo okwu a ga -enye anyị ebe ikpeazụ dị tupu batrị ya agwụ ma ọ bụ gbanyụọ ya.
Ọrụ a, dị ka nke gara aga, Google na -enyekwa anyị ya site na njikwa Jikwaa Ngwaọrụ.
Ịnweta ngwa pụrụ iche
Nlekọta ahụike Samsung, Samsung Health, na -elekọta nyochaa mmega ahụ niile site na ha wearables. Ikpo okwu a, nke dị mfe site na Google Fit, dị naanị maka ndị ọrụ Samsung smartphone.
Accessnweta ụlọ ahịa Samsung
Agbanyeghị na ekwentị Samsung niile nwere ike banye na Storelọ Ahịa Play, Samsung na -eme ka ndị ahịa ya niile nweta ụlọ ahịa nke ya, ụlọ ahịa ebe anyị nwere ike ịchọta ngwa na ebe pụrụ iche. enwerekwa ọtụtụ ngwa dị na Storelọ Ahịa Playewezuga Fortnite.
Na mgbakwunye na ịnweta egwuregwu na ngwa, na Storelọ Ahịa Galaxy anyị ga -ahụ a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke isiokwu na akwụkwọ ahụaja ma haziri maka ekwentị mkpanaka gị, ụfọdụ akwụkwọ ahụaja anyị agaghị ahụ na Storelọ Ahịa Play.
Samsung Home bụ Samsung igwe eji arụ ọrụ ụlọ, nke anyị nwere ike ijikwa ngwa ụlọ jikwaa ngwa ụlọ site n'aka onye nrụpụta a, dị ka asher, draya, friji yana telivishọn na ndị na -ekwu okwu.
Samsung na -enye anyị ohere ime nkwado ndabere data niile echekwara na ọdụ ụgbọ mmiri anyị na -ejighị ohere na Google Drive, ebe echekwara data niile na igwe ojii Samsung
Ke adianade do, ọ na -enye ohere ka anyị mee a ndabere nke ntọala ngwaọrụ anyị, ọrụ nke na -enye anyị ohere iweghachi ekwentị anyị ngwa ngwa na -enweghị oge ịhazigharị ngwaọrụ ahụ.
Akaụntụ ahụ ọ bara uru na akaụntụ Samsung?
Ọ bụrụ na ị bụ onye na -eji ngwaahịa Samsung mgbe niile, ọ bụrụ smartphones, smartwatches, mbadamba, telivishọn, ọkà okwu ma ọ bụ ngwa ụlọ, doro anya ọ bụrụ na ọ bara uru ịmepụta akaụntụ Samsung.
Ekele maka akaụntụ a, anyị ga -enwe ike iweghachi data niile ngwa ngwa site na mbipụta ndabere anyị mepụtara. Na mgbakwunye, ọ na -enye anyị ohere ijikwa ngwaọrụ ndị ọzọ na anya. Ọzọkwa, ọ bụrụ na anyị nwere mbadamba Samsung na ama, anyị nwere ike azịza ya na -akpọ nke ọma na mbadamba, gaa n'ihu na -eji otu ngwa ahụ na mbadamba ...
Ọ bụrụ naanị na ị nwere otu Samsung smartphone Ma ị nweghị ngwaahịa Samsung ọ bụla, ọ baghị uru n'ezie ịmepụta akaụntụ Samsung, ebe ọ bụ na anyị agaghị erite uru ya karịa isiokwu ma ọ bụ akwụkwọ ahụaja.
Ka idetuo ndabere, ugbu a anyị nwere 15GB n'efu nke Google na -enye anyị. Ngwa ndị dị na ụlọ ahịa Samsung, ewezuga Fortnite, bụ otu ihe anyị nwere ike ịchọta na Storelọ Ahịa Google Play.
Inwe akaụntụ Samsung na -enye anyị ohere jiri ohere nke njikọta ngwaahịa gị niile site na otu akaụntụ, n'ụzọ yiri nnọọ ihe Apple na -enye anyị, mana ọ bụghị Google.
Taa, njikọta ngwaọrụ ejedebere na gburugburu ebe obibi, ebe ọ bụ n'ụzọ dị otu a iwu ndị ọrụ ga -aga n'ihu na -azụ ngwaahịa ha ka ha wee nweta ihe kacha ha mma.
Otu esi emepụta akaụntụ Samsung
Iji mepụta otu akaụntụ, anyị nwere nhọrọ abụọ:
Site na webụsaịtị gọọmentị Samsung
Site na ngwa Samsung Store etinyere na ngwaọrụ ahụ
Iji mepụta akaụntụ sitere na webụsaịtị Samsung, pịa nke a njikọ wee pịa Mepụta akaụntụ.
Na -esote, anyị na -akara oche ịnata ozi ma na -enye nhọrọ ma melite ozi nkeonwe na onyinye pụrụ iche ma ọ bụrụ na anyị chọrọ, Ọ bụ nhọrọ wee pịa Nabata.
Mgbe ahụ anyị na -abanye email anyị, paswọọdụ, anyị na -edegharị otu paswọọdụ, aha mbụ, aha ikpeazụ na ụbọchị ọmụmụ.
N'ikpeazụ, ngwa ahụ ga -enye anyị nhọrọ nwee nyocha abuo. Ọrụ a chọrọ nọmba ekwentị ebe ọ ga -ezitere anyị koodu nwa oge oge ọ bụla anyị banyere na ekwentị Galaxy ma ọ bụ nweta webụsaịtị onye otu Samsung.
Iji jikọọ ekwentị Galaxy na akaụntụ Samsung, anyị ga -emerịrị ya banye na ngwa Storelọ Ahịa Samsung.
Nzọụkwụ iji mepụta akaụntụ site na ngwa Samsung Store bụ otu ihe ahụ site na webụsaịtị, n'ezie, a na -egosipụta otu ibe weebụ dị ka mgbe anyị mepere akaụntụ site na ihe nchọgharị.
Otu esi ehichapụ akaụntụ Samsung
Ihe mbụ anyị ga -eme bụ ịnweta webụsaịtị Samsung site na nke a njikọ ma tinye data nke akaụntụ anyị.
Na-esote, pịa na Profaịlụ.
N'ime profaịlụ, pịa Jikwaa faịlụ Samsung akaụntụ.
N'ikpeazụ, pịa na Hichapụ akaụntụ, lelee igbe m maara ọnọdụ ndị a kpọtụrụ aha n'elu ma ekwetara m ihichapụ akaụntụ Samsung m na akụkọ ihe mere eme m.
Anyị na -akwado na anyị chọrọ ihichapụ akaụntụ ahụ site na ịpị Hichapụ.
Buru n'uche na usoro a anaghị agbanwe agbanwe. Ozugbo anyị kwadoro na anyị chọrọ ihichapụ akaụntụ ahụ, anyị agaghị enwe ụzọ anyị ga -esi weghachite ya ọzọ, nke ga -amanye anyị imepụta nke ọhụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Nkuzi » Otu esi ehichapụ akaụntụ Samsung kpamkpam